5 ku guuleystayaasha ugu waaweyn Transportation
Waxaan soo aruurinay kaydka ugu weyn ee ka helay Transportation. Kaydkaani waa kala duwan yihiin dhinacyo dhowr ah waana wax mudan in la barto si loo fahmo kala duwanaanta lagana yaabo in loo muujiyo fursadaha maalgashi ee cusub. Xaqiiqda ah in kaydku kor u kaco macnaheedu maahan inuu sii socon doono, laakiin taasi mararka qaarkood waa run. Waxa kale oo muhiim ah in la qiimeeyo go'aanada maalgashiga oo aan lagu salayn oo keliya xaqiiqda in saamigu maalmo badan marayso maalin gudaheed, laakiin sidoo kale tixgalinta qodobo kale sida daboolka suuqa, xiisaha hadda loo qabo saamiga (saamiga saamiga), dakhliyadiisa iyo faa'iidooyinka iyo guud ahaanba waa isbeddelka kobaca / hoos udhaca waqtiyada waaweyn (maahan maalin keliya). Bal aan eegno 5ta guuleyste ee ugu waaweyn ee maanta:
MAGACA helay macaashka 1.47%. Shirkaddan waxay ku faantaa inay kor u qaadeyso $ 12.96B. Toddobaadkii ugu dambeeyay oo keli ah, saamiga ayaa beddelay -3.97%. Bishii ugu dambeysay boqolkiiba afar, iyo sanadkii la soo dhaafay -10.33%. Warbixinta dakhligii ugu dambeeyay, waxay ku sheegtey dakhli dhan $ 8.138B oo leh koror dakhli ah 17.59%. Macaashka guud waa $ 2.620B.
Caannimada saamiyada waxaa lagu qiyaasi karaa tirada macaamilada iibka la iibsado oo la sameeyo maalin uun. Markay ahayd EXPD, tiradaas ayaa noqotay mugga 894501.
MAGACA helay macaashka 1.46%. Shirkaddan waxay ku faantaa inay kor u qaadeyso $ 0.86B. Toddobaadkii ugu dambeeyay oo keli ah, saamiga ayaa beddelay -3.19%. Bishii ugu dambeysay boqolkiiba afar, iyo sanadkii la soo dhaafay 28.10%. Warbixinta dakhligii ugu dambeeyay, waxay ku sheegtey dakhli dhan $ 0.376B oo leh koror dakhli ah 5.88%. Macaashka guud waa $ 0.138B.
Caannimada saamiyada waxaa lagu qiyaasi karaa tirada macaamilada iibka la iibsado oo la sameeyo maalin uun. Markay ahayd DHT, tiradaas ayaa noqotay mugga 965538.
MAGACA helay macaashka 1.26%. Shirkaddan waxay ku faantaa inay kor u qaadeyso $ 6.04B. Toddobaadkii ugu dambeeyay oo keli ah, saamiga ayaa beddelay -1.17%. Bishii ugu dambeysay boqolkiiba afar, iyo sanadkii la soo dhaafay 7.00%. Warbixinta dakhligii ugu dambeeyay, waxay ku sheegtey dakhli dhan $ 0.721B oo leh koror dakhli ah 14.62%. Macaashka guud waa $ 0.595B.
Caannimada saamiyada waxaa lagu qiyaasi karaa tirada macaamilada iibka la iibsado oo la sameeyo maalin uun. Markay ahayd PAC, tiradaas ayaa noqotay mugga 56781.
MAGACA helay macaashka 1.25%. Shirkaddan waxay ku faantaa inay kor u qaadeyso $ 4.22B. Toddobaadkii ugu dambeeyay oo keli ah, saamiga ayaa beddelay -9.48%. Bishii ugu dambeysay boqolkiiba afar, iyo sanadkii la soo dhaafay -10.57%. Warbixinta dakhligii ugu dambeeyay, waxay ku sheegtey dakhli dhan $ 3.489B oo leh koror dakhli ah 4.24%. Macaashka guud waa $ 0.786B.
Caannimada saamiyada waxaa lagu qiyaasi karaa tirada macaamilada iibka la iibsado oo la sameeyo maalin uun. Markay ahayd BCO, tiradaas ayaa noqotay mugga 505078.
MAGACA helay macaashka 0.89%. Shirkaddan waxay ku faantaa inay kor u qaadeyso $ 9.88B. Toddobaadkii ugu dambeeyay oo keli ah, saamiga ayaa beddelay 0.26%. Bishii ugu dambeysay boqolkiiba afar, iyo sanadkii la soo dhaafay -21.30%. Warbixinta dakhligii ugu dambeeyay, waxay ku sheegtey dakhli dhan $ 8.615B oo leh koror dakhli ah 19.82%. Macaashka guud waa $ 3.367B.
Caannimada saamiyada waxaa lagu qiyaasi karaa tirada macaamilada iibka la iibsado oo la sameeyo maalin uun. Markay ahayd JBHT, tiradaas ayaa noqotay mugga 1088982.